कैलाशको कुटी: पत्रकार महासंघमा नयाँ नेतृत्व चयन
आज विहानैदेखि सिमसिमे पानीको शीतल मौसमसँगै पत्रकार महासंघको चुनावी वातावरण रन्कियो। हुन त यसबारे सबैलाई थाहै छ। तैपनि मलाई मेरो डायरीमा अलिकति कुरा कोट्याउन मन लाग्यो। लेखु लेखु लाग्यो।
हिजोको टन्टलापुर घामसँगै प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको शुरुआत भएको थियो- प्रभातफेरी कार्यक्रमसँगै। जसमा मिडियामा कुनै न कुनै हिसाबले संलग्न भएका व्यक्तिहरुको उल्लेख्य सहभागिता थियो। जसको मूल नारा "स्वतन्त्र प्रेस, मौलिक अधिकारको सम्मान" रहेको थियो। हिजोको प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको चहलपहलसँगै नेपाल पत्रकार महासंघको चुनावी माहौल पनि तात्तिन पुग्यो। र, 'लोकतन्त्रको आधारः सुरक्षित पत्रकार' भन्ने मूल नाराका साथ नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा २२औँ महाधिवेशन शुरु भयो।
यो चुनाव भन्ने नाम लाग्नासाथ जुनसुकै चुनाव होस्, जहाँसुकैको चुनाव होस् लफडा ननिस्किकन त सम्पन्नै हुँदैन गाँठे हो। आर्थिक प्रतिवेदनमा देखिएको अनियमितता र अपारदर्शिताको कारणले विहानैदेखि हुने भनिएको मतदान केही समय रोकिन पुग्यो। जहाँपनि यो अर्थकै चलखेल। हत्तेरीका ! यो अर्थको मामिला साह्रै अचम्मको। धेरैजसो किचलो र झमेलाको जड प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा अर्थसँगै गाँसिएको हुन्छ। हुन त हिजोको कान्तिपुरमा पनि पढ्‍न पाइएको थियो यससम्बन्धी। स‌विधान सभाको चुनाव त मजाले सम्पन्न भएको देशमा यो चुनाव रोकिने कुरा हुँदैभएन नि। त्यसैले त केही समय रोकिएपनि अहिले धमाधम मतदान चल्दैछ। साँझसम्म त परिणाम पनि आइहाल्छ पो ।
मतदानका लागि लाइनमा उभिएका खोटाङका जिल्ला सभापतिसँग फोनमा कुराकानी गर्दा थाहा पाइयो- उम्मेदवारीको मैदानमा महिला, जनजाति, दलित पनि उल्लेख्य संख्यामा उत्रिएका छन् रे। महिला, जनजाति तथा दलितहरुको उम्मेदवारी पर्नु राम्रो हो नि। तर केन्द्रीय सदस्यको लागि मात्रै पो त्यत्तिका धेरै उम्मेदवारी। यो कुरामा उनको पनि सहमति थियो। त्यो भन्दा माथिल्लो पद (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्षलगायत)मा त सिर्फ एकजना महिला 'बीउ' स्वरुप उभिएकी छिन् महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिएर। उनले जितुन् भन्ने शुभकामना । तर उनको उम्मेदवारी जित्नलाई हो या कसैलाई हराउनलाई मात्रै हो कुन्नी। त्यो भने भित्री कुरो हो फेरी। जे भएपनि महिलाको प्रतिनिधित्व त हुनेपर्यो नि ।
मुख्य मुख्य पदमा रहँदैआएका र अहिलेको पाली पनि माथिल्लो पदमा भिडन्तमा उत्रिएकाहरुमा विविध जातिको अनुहारै देखिँदैन त हौँ। तर भोट हाल्ने ठाउँमा विविध जातजाति, समुदाय, वर्ग तथा लिङ्ग सामेल छन्। फेरीपनि आशा त छ प्रशस्तै। केन्द्रिय सदस्यको रुपमा महिला, जनजाति, दलित, मधेसी चुनिए भने अर्कोपाली त माथिल्लो तहमा पनि कसो समावेशी नहोला। हैन र?
Posted by कैलाश at 11:32 PM